I-Testosterone i-acetate powder: nceda ungayisebenzisi ukuba awukwazi
/Blog/I-Trenbolone Acetate/I-testosterone i-acetate powder: nceda ungayisebenzisi ukuba ungazazi ezi zinto!
ezaposwa ngomhla 12 / 09 / 2017 by UDkt Patrick Young bha liweyo I-Trenbolone Acetate.
nceda ungayisebenzisi ukuba ungazazi ezi zinto!
Eli nqaku libhalelwe abantu abaya kuthatha i-Testosterone acetate powder, ngaphambi kokuyisebenzisa, akufanele uphoswe nayiphi na inkcazelo kwinqaku elilandelayo.
1.Testosterone Uhlolo lwe-Acetate 2.Yintoni i-Testosterone Acetate powder?
3.Yintoni i-injtosterone acetate injections? 4.Yintoni i-Testosterone?
I-5.Ziziphi iziphumo ezibangelwa yi-Testosterone ephantsi? 6.I-Testosterone i-Acetate isebenza njani kwi-Testosterone ephantsi?
7.Yintoni i-Testosterone Acetate? Ingakanani i-Testosterone Acetate kufuneka ndiyijoze? 8.Testosterone umjikelezo we-acetate & usetyenziso lwe-Body Building
9.Iziphi iimpembelelo ezingasetyenziswayo ze-Testosterone Acetate? 10.Ukuphi ukuthenga ubungcwele obuphezulu be-Testosterone Acetate powder?
11.Testosterone Isishwankathelo se-Acetate
Testosterone Acetate ngenye yeendidi ezininzi eziqinisekisiweyo ze Testosterone ezikhoyo, (njengaye Testosterone cypionate-Wathetha kwinqaku elidlulileyo) ngokuqhelekileyo abanxibe impahla kwaye unyango lwe-ED, ezinye iintlobo zeTestosterone ziyi-Testosterone decanoate, Isanti enomthamo, Testosterone phenylpropionate, Testosterone isocaproate, Testosterone propionate,Testosterone Sustanon 250, zonke ziyinxalenye yeentlobo zeTestosterone.
I-Testosterone I-Acetate inezinga elikhawulezayo lokumanyiswa emzimbeni, ezinye iindidi. IiNqanaba eziphakamileyo kwiiyure ze-12 ngoko kuya kufuna ukuba ujobe iintsuku zonke ukugcina amanqanaba akho e-testosterone aqhubekayo. Mg nge-Mg uza kuba ne-testosterone efumanekayo kunye ne-Acetate kwaye uya kuba kunye nawaphi na ama-testosterones ester based longer. I-100mg ye-Testosterone I-Acetate iya kuziva ibe namandla kune-100mg Testosterone Propionate.
Njengomgaqo jikelele, i-ester esheshayo / mfutshane, iphakamileyo i-PIP (intlungu yentlungu) xa ifika kwi-Testosterone (Uvavanyo). Ukujoba i-testosterone ende ende njenge-Enanthate kabini ngeveki iya kunika amanqanaba egazi aqinisekileyo.
I-testosterone i-acetate eluhlaza powder video
igama: Testosterone acetate
Yintoni i-Testosterone Acetate powder eluhlaza?
I-Testosterone I-Acetate ipowder eluhlaza, into ebonakalayo ye-Testosterone Acetate, luhlobo lwe-White Crystalline powder, oluqhelekileyo elisetyenziselwa ukwenza i-testosterone Acetate injectins,
iinkcukacha ze-Testosterone Acetate njengezantsi:
Igama: I-Testosterone Acetate
Ukufunwa: I-White Crystalline powder
Isisombululo: 250-1000mg / iveki
Yintoni i-instosterone acetate injections?
Inyolo ye-Testosterone ye-acetate iyinye yeendlela ezigqithisileyo zonyango kumaqondo aphantsi e-testosterone okanye i-hypogonadism kubantu abadala. ukuphucula amahlunu.
Zininzi iintlobo ze testosterone zikhoyo kwiimarike namhlanje. Ezinye zizona zinamandla kunezinye, ezifana ne-testosterone acetate.
Ukwazi ngabo, indlela abaziphatha ngayo emzimbeni, kunye nokuqaphela ukusebenzisa kubalulekile.
testosterone unoxanduva lwemisebenzi emzimbeni.
I-hormone yokuqala kunye ne-orrogenic enoxanduva lokuphuhliswa kunye nokukhula kwezibonda zesilisa okanye zesilisa.
Iveliswa kwiiseli ze-Leydig zamathambo kwaye zilawula izikhuni ze-gonadotropin, zivuselela imisipha yomzimba, kwaye ijongene nokukhula komzimba.
Inayo inezinto ezininzi zeprotein ze-anabolic, ngokugqithiseleyo ezibonakalayo ngenxa yokukwazi ukugcina i-calcium, i-potassium, i-nitrogen, ne-phosphorus, yonke impawu ebalulekileyo ye-muscle mass kunye nokugcinwa kwezicubu zamathambo kubantu besilisa abadala.
Lo mveliso uhlolwe kwaye ulawulwa yi-pituitary gland kwingqondo.
Ziziphi iziphumo zecala le-Testosterone ephantsi?
Amadoda ngokuqhelekileyo aqala ukulahlekelwa ezinye ze testosterone xa bebetha ii-30 okanye ii-40. Ukuncipha okukhawuleza kwinqanaba le testosterone kungabonisa ingxaki ebizwa ngokuba yi-low testosterone (i-T ephantsi). I-Testosterone ephantsi ingabangela:
i-erectile dysfunction (ED)
ukuxinezeleka okanye uxinzelelo
Amanye amadoda angaba neenguqu ngobukhulu beepenis kunye namathambo. Abanye banokuba nokunyumba kwebele.
Okona, kungabangela ukuguqulwa kwe-Fat kunye ne-muscle.
Amadoda ngokubanzi anamafutha omzimba angaphantsi kunabesifazane. Oku kuhambelana nenxalenye ye testosterone, elawula ukuhanjiswa kweoli kunye nokugcinwa kwemisipha emzimbeni wakho. Nge-T ephantsi, uya kubona ukunyuka kwamafutha omzimba, ngokukodwa kwi-middlesection yakho.
Amahomoni akho nawo anceda ukulawula ukukhula kwemisipha. Ngoko, nge-T ephantsi, unokuba uzive ngathi ulahlekelwa usayizi we-muscle okanye amandla. Nangona kunjalo, oku kwenzeka kuphela ukuba i-T yakho ephantsi ihlala ide kwaye inzima.
Izibhengezo zeTesttosterone zinokukunceda ukulawula ukusabalalisa i-fat, kodwa akufanele ulindele ukuguqulwa kwamandla omzimba kwi-hormone yonyango kuphela. Ngokumalunga nokugcinwa kwemisipha, unyango lwe-testosterone luye lwafunyanwa ukunceda ukwandisa ubunzima bomzimba, kodwa kungekhona amandla.
I-Testosterone Acetate isebenza njani kwi-Testosterone ephantsi?
I-Testosterone i-Acetate iyimelakhi ye-steroid lipid. I-testosterone acetate isebenza ngokufaka endaweni ye testosterone ukuba umzimba ulahlekile. I-testosterone i-acetate ifanele isetyenziswe kuphela ukuba i-testosterone inqongophele iye yaqinisekiswa yimpawu kunye nokuhlolwa kwegazi. I-tetosterone yi-hormone yesilisa, ibekwe njenge-androgen okanye i-endocrine ye-metrolic agent, kwaye ixanduva lokuphuhlisa impawu zesini zesibini kumadoda kuquka nokuphuhliswa nokugcinwa izitho zocansi, ukukhula kweenwele zobuso, ukuphuhliswa komzimba kunye nezinye iimpawu. Kwifom yesigunyaziso, isetyenziselwa ukunyanga imiba yeendysterone zamadoda, kubandakanywa amanqanaba aphantsi ase testosterone (hypogonadism). I-testosterone i-acetate yindlela enye ye-ester.Iifom ze-testosterone ziyafumaneka kwiimarike namhlanje. Ezinye zizona zinamandla kunezinye, ezifana ne-testosterone acetate. Inyolo ye-Testosterone ye-acetate yinye yeendlela ezigqithisileyo zonyango kumaqondo aphantsi e-testosterone okanye i-hypogonadism kubantu abadala. Amanxeba aqhelekileyo asetyenziswa ngabazimba be-bodybuilders ukuphucula i-muscle gain.
Yiyiphi Imilinganiselo ye-Testosterone Acetate? / Ingakanani i-Testosterone Acetate kufuneka ndiyijoze?
I-Testosterone I-Acetate yi-Androgen, eqhelekileyo isetyenziselwa ukwakha umzimba, ukugcina umzimba nokukhuthaza ukuphuhliswa kwamalungu omzimba kunye nesondo.
Ukuba unesigama kunye nesiqingatha sokuvavanya njengomcwangcisi womzimba okhuphisanayo, uya kuhlala unamazinga aphakamileyo ovavanyo lwegazi. Kodwa ke, loo nto ayinempilo. Kule nkqubela yezempilo, amanqanaba amaninzi aphantsi akhethwe. Umjikelo okhuselekileyo uza kuba ne-4-500 mgs yokuvavanya ngeveki. I-dose ye-HRT yovavanyo iphantsi kwe-250 mgs iveki. Gcinani engqondweni, uhlala kwi-HRT phantse unyaka wonke, kwaye ke kutheni uqhuma uhlale kwi-250 okanye ngezantsi. I-acece yokuvavanya ikunika ixesha elifutshane xa ufuna.
Umjikelezo we-Testosterone u-acetate & usetyenziso lwe-Body Building
i-testosterone i-acetate dosage. Akusiyo imfihlelo yokuba iilenki zixhaphake kakhulu phakathi kwabakhi bomzimba, okanye ngaphandle kwemimiselo.
Umlinganiselo wokujikeleza umzimba we-Testosterone Acetate bodybuilding, uhluka kubantu ukuya kubantu, kubangela ukuba umzimba ukhuthazeke ngokwenyama uphelele wonke umntu. Lona umjikelo wokucebisa ukwakhiwa komzimba, empeleni unokufumana lula kwiforum, utshintshe umlinganiselo ngokwakho. nje ngokubhekisa)
Uvavanyo lwe-Acetate 100mg EOD (300mg / iveki)
I-Clomid 100 / 100 / 50 / 50
Kufuneka kwakhona kuqaphele ukuba ngelixa iiliti ze-steroid zithandwa ngabantu abaqeshwe ngemizimba ekuzuzeni ama-muscle kunye neenjongo zokuqinisa, iziphumo ezinjalo zihlala zinyamalalala xa isicatshulwa siphelile. Ezinye izisombululo zincinci malunga nesiqingatha sobomi kunabanye.
I-testosterone i-acetate-half-life inokuvelisa ukwanda ngokukhawuleza kumanqanaba athatywayo, kodwa loo miphumo igxothwa emva kweentsuku ezimbini ukuya kweyimihla.
Ziziphi iimpembelelo zangaphandle zeTettosterone Acetate powder eluhlaza?
I-testosterone i-acetate inegama lenye yezona ndlela ezinamandla kunye ezinamandla ze-injection ye-steroid. Ukujikeleza kwe-acetate umjikelezo kunokufaka imiphumo engalindelekanga njengobuncitshulwa kwamathambo, ukulahleka kweenwele, ukulahleka kwe-libido, intloko, ukuxhalaba kunye nezinye , ukuguquka kwemizwelo.Iyona hormone enamandla enokuchaphazela impilo, yengqondo, kunye nempilo yengqondo kunye nokuphila kakuhle. Ngaloo ndlela, kufuneka ihlonishwe kwaye isetyenziswe ngokucophelela. I-testosterone acetate yaqala ukuchazwa emininzi eminyaka eyadlulayo, xa i-orrogens ejoyiweyo yaqala ukuphuhliswa. Le steroid yashiya isenzo seklinikhi ngokukhawuleza, kwaye mhlawumbi ngenxa yezizathu ezifanelekileyo. Kwathatyathwa ngamagosa ayenokukhululeka, asebenze ngokukhawuleza, abe ne-solubility ephezulu yeoli, ayegxininiswe ngakumbi kwaye anikezela kakhulu amandla okwelapha. Ngamafutshane, i-testosterone acetate "iya kusebenza" njengeyiphi na isicatshulwa se testosterone kuba inika i testosterone. Kodwa zonke kuzo, akunqwenelekayo ngaphandle kokuba ufuna isenzo sokukhawuleza kunye nesicatshulwa esicasulayo ngesizathu esithile.
Ziziphi ezinye iinkcukacha ezibalulekileyo kufuneka ndizazi malunga ne-Testosterone acetate?
I-testosterone i-acetate inegama lomnye wezona ndlela ezinamandla kunye ezinamandla zeeriti ze-steroid.
I-Testosterone Acetate ibangela umngeni kulabo abakwenzayo. Ngokuqhelekileyo, iifutshane i-ester inokwenzeka ukuba kuya kuba nePIP. I-Acetate yethu ibekezeleke / ayibuhlungu. Enye inzuzo yinqanaba lokukhutshwa kwe-Ester iyakulungelelwa kubadlali abavavanywe. Inqaku elibalulekileyo eliyithathayo kukuba i-Testosterone Acetate iya kunceda kakhulu ngokukhawuleza kunomnye u-Esters ngoko kuya kufuneka uthathe isilumkiso ukuba uzama ukulawula iziphumo zempembelelo ze-estrogen. I-100mg ye-Acetate yomelele ngakumbi kwaye i-Enanthate ukuze ifake i-SERM okanye i-anti-aromatase ngokubambisana ne-Test Ace.
Ayikho imfihlo yokuba iilenki zidume kakhulu phakathi kwabakhi bomzimba, kunye okanye ngaphandle kwemimiselo. Kufuneka kwakhona kuqaphele ukuba ngelixa iiliti ze-steroid zithandwa ngabantu abaqeshwe ngemizimba ekuzuzeni ama-muscle kunye neenjongo zokuqinisa, iziphumo ezinjalo zihlala zinyamalalala xa isicatshulwa siphelile. Ezinye izisombululo zincinci malunga nesiqingatha sobomi kunabanye. I-testosterone acetate-half-life inokuvelisa ukwanda ngokukhawuleza kumanqanaba athatywayo, kodwa loo miphumo igxothwa emva kweentsuku ezimbini ukuya kweyimihla.
Kufuneka kwakhona kuqatshelwe ukuba nangona iiliti ze-steroid zizuza kwi-earning gain kwaye zomeleza iinjongo kumalungu omzimba, iziphumo zihlala zinyamalale xa isicatshulwa siphelile. Ezinye izisombululo zifutshane ngokwexesha lesigamu sokuphila kunezinye iindlela. Isiqingatha-ubomi se-testosterone acetate sinokunyuka ngokukhawuleza, kodwa le miphumo iya kulahla emva kweentsuku ze-1-2.
Indlela yokugqiba i-Testosterone Acetate kwi-Testosterone Acétate powder eluhlaza?
Nantsi iresiphi elula:
3g vavanyo a / p / iphe powder
2g wenze ipowder
Kuphi ukuthenga ubungqina obuphezulu beTesttosterone Acetate powder eluhlaza?
I-Testosterone I-Acetate ipowder eluhlaza yinto ethandwa kakhulu yi-anabolic steroid, kwaye kufuneka ifunyanwe lula kwi-market ye-anabolic steroid emnyama ngaphandle kwemizamo. Kuqheleke kakhulu kwaye kulula ukuveliswa ukuba kufuneka ifumaneke kwixabiso elifanelekileyo. I-Testosterone I-Acetate ipowder eluhlaza ikhona njengemveliso yamabanga amabakala e-bakala abantu, kunye nemveliso yebhanki yehlabathi (UGL) kwimakethe. Ukwahluka kubonakala apha, kunye nokulawulwa kwekhwalithi yinkxalabo eyintloko, kwaye ibakala leyeza elinoTytosterone Acétate powder eluhlaza ngokuqhelekileyo libiza kakhulu ngenxa yezizathu ezicacileyo.
I-Testosterone I-Acetate ipowder eluhlaza ingathengwa kwimithombo ye-intanethi kunye nabathengisi, kunye nokuthengiswa kwendabuko kumntu (oko kukuthi 'i-gym-dealers'). Ixabiso liyahluka. I-Testosterone yamayeza I-Acetate ipowder eluhlaza ingatholakala kwi-USD400-USD1000 / kg.Uma ukhetha ipowder.Imiyalelo yesampula iyalelwa ukuba uvavanye loo mveliso ukuze ukwazi ukugcina ixesha elininzi kunye nemali.
Isishwankathelo se-Acetate isicatshulwa
I-Acetate ye-Testosterone iyinariti ye-androgenic enefuthe elibizwa ngokuba yi-anabolic. Uninzi unyango lwe-acetate luhambisa amayeza kumzimba ngokukhawuleza. I-Acetate yeTesttosterone inomngcipheko ophantsi kakhulu wokugcina amanzi. Abantu abasebenzisa le fom yeTestosterone banokuthi banokuthi bangenabuhlungu buhlobo lwe Testosterone.
I-testosterone i-acetate ester isebenza ngokukhawuleza, kwaye ngoko ke idinga ixesha eliqhelekileyo ukwenzela ukugcina amanqanaba egazi ngokuzinzile. Inzuzo kulokhu kunjalo kukuba i-steroid ingasuswa emzimbeni ngokukhawuleza emva kokusetyenziswa kuphelile, ngaloo ndlela yenza kube yinto ekhethekileyo yokukhetha abadlali abavavanywe. Abadlali bebhola basebenzisa i-Testosterone Acetate ukuze babone inzuzo ephawulekayo ngobukhulu bamasipha kunye namandla, kunye nomqondo jikelele wokuphila kakuhle kunye nokwandisa i-libido kunye ngesondo.
Indlela yokuthenga iVardenafil hydrochloride powder eluhlaza ukusuka e-AASRAW?	I-Primobolan yindlela esetyenziswa kakhulu kwi-anabolic steroid ekunqumeni imijikelezo ye-steroid